Ndifuna ukubeka amakhonkco kwi-Instagram yam, kodwa ndinabalandeli abangaphantsi kwe-10.000. Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 251
Ngokumalunga neendlela zokuthengisa kusetyenziswa uthungelwano lwentlalo, i-Instagram yeyona nto uyithandayo kwaye ukude, Esi sicelo sisivumela ukuba silawule amashishini esifuna, ukuba nje iyahambelana nemigaqo efanayo. Ukuthengisa kwidijithali kulula ukuphatha ngale ndlela kwaye, ukongeza, kusinika iindlela ezininzi ezothusayo zokuma phakathi kwabo sikhuphisana nabo.
Ukuba yinjongo yakho Yima ngaphandle kwabanye ngokusebenzisa amakhonkco kwi-Instagram, kodwa awunabalandeli abangaphezu kwe-10.000, nantsi siza kukuxelela ukuba ungayenza njani ngaphandle kokuthobela le meko. Olu lolunye lwezona zibonelelo zibalaseleyo zeapp, kwaye ngekhe uyeke ukuyisebenzisa ukuze ufumane inzuzo.
Uyisebenzisa njani le nto yokuthengisa:
Into yokuqala kukuba ube neakhawunti yeshishini elisebenzayo le-Instagram elinabalandeli abaninzi.
Esona sixhobo sinomtsalane:
Esi sisixhobo kulula ukuphatha kwaye ikunika ezinye iindlela ezilungileyo zokufaka amakhonkco afunekayo ukukhuthaza ishishini lakho.
Ngakolunye uhlangothi, ikuvumela ukuba uphathe uthungelwano lwasentlalweni, Ukucwangcisa umxholo oza kuwongeza kubo.
Ikunika kwakhona enye indlela yokufumana iingxelo yemisebenzi yenethiwekhi elawulayo.
Ukhetho lokudibanisa amaphepha anxulumene neenethiwekhi zentlalo yeshishini lakho yenye yezona zinto ziluncedo ekunikezelayo, ezi ziya kubonakala njengodonga olunye. Olu khetho kufuneka luhlawulwe.
Ngena kwiakhawunti yakho Imetrikhi.
Khangela kwaye ucofe ukhetho "Ukucwangcisa".
Kwicala lasekhohlo lesikrini, kuya kufuneka ufumane Icandelo lezonxibelelwano ze-Instagram.
Ngeli xesha izakukunika enye indlela yokumisela amakhonkco akho, unokwenza ikhonkco elinye kupapasho, esi sisicwangciso esiliqili sentengiso, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba uyisebenzisa kanjani kakuhle ukukuthanda.
Oku kuyakuvelisa ikhonkco ekufuneka ulwenzile ikopi kwaye kamva uncamathisele kwiibhayografi zakho. Ngaphambi kweefoto unokufumana eli khonkco.
Icandelo lokudibanisa liya kukuvumela ukuba ufake imifanekiso emininzi ukuba unqwenela, kuya kufuneka ukhethe ukhetho lokongeza imifanekiso.
Ngesi sixhobo unokwenza ungeniso lwe amakhonkco akho asimahlaKuba inenguqulo, inezibonelelo ezimbalwa, kodwa isimahla, kunjalo kukho ingxelo ehlawulelweyo. Esi sixhobo siyakuvumela ukuba uhambise kwakhona amakhonkco e-biografi yakho kwiphepha apho ungabonisa khona ezinye iindlela onokuzifumana kubathengi bakho.
Le ndlela yentengiso ingqineke iyimpumelelo ngokubonisa iimveliso kubathengi, ngakumbi iivenkile ezibonakalayo, Ewe, xa ubaphambukisela emaphepheni, abathengi banokuyixabisa ikhathalogu yeemveliso esele zikhona kwaye ke bakhethe kakuhle ngakumbi izinto abafuna ukuzithenga okanye ukuzizuza.
Siyathemba ukuba ulwazi esikunike lona luluncedo kuwe, kwaye Ngethamsanqa ngeshishini lakho.
1 Uyisebenzisa njani le nto yokuthengisa:
2 Esona sixhobo sinomtsalane:
4 Enye indlela: